Vitaly Core Web dia andiana metatra tena izy, mifototra amin'ny mpampiasa izay manisa ny lafiny lehibe amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Izy ireo dia mandrefy ny refin'ny fampiasana Internet toy ny fotoana fandefasana, ny fifandraisana, ary ny fahamarinan'ny atiny rehefa mavesatra (noho izany dia tsy tampoka tampoka io bokotra io rehefa miova eo ambanin'ny rantsan-tànanao izy - mahasosotra tokoa!).
Fanemorana ny fidirana voalohany (FID): fepetra interactivity. Mba hanomezana traikefa tsara an'ny mpampiasa dia tokony hanana FID an'ny pejy Millisecond 100 na kely kokoa.
Inona avy ireo tranga niainan'ny pejy Google?
Mampiasa sary statistika amin'ny antsipiriany, fikarohana tany am-boalohany, ary torohevitra azo ampiharina, ny sary Inona no fiantraikan'ny SEO lehibe amin'ny Internet amin'ny mpanorina tranokala manaparitaka ireo fanavaozana Core Web Vitals vaovao sy fanavaozana ny pejy Experience an'i Google, ny fiantraikan'ny CWV tamin'ny zava-bitan'ny mpanorina tranokala ecommerce fito malaza, ary ny fomba hanatsarana ny tranokala noforonina tamin'ny fampiasana mpanamboatra ho azy ireo.